Madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu wali socdo baaritaanka weerarkii Garowe | Sagal Radio Services
Dr. C/wali Gaas oo shalay dib ugu laabtay magaalada Garowe, ayaa sheegay in baaritaanka uu meel wanaagsan marayo, isla markaana dhowaan la soo bandhigi doono natiijada baaritaanka.
Waxaa uu sheegay in Puntland ay tallaab ka qaadi doonto kooxihii ka dambeeyay weerarkaas, waxaana uu xusay in weerarkaas adkeynayo midnimada iyo amniga Puntland.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in deegaanada Puntland ka sifeyn doonaan Al-Shabaab, waxaana uu intaa ku daray inay dagaal adag la geli doonaan.
Guddiga Baaritaanka weerarkii Garowe oo ka kooban ilaa shan xubnood ayaa la filayaa in dhowaan soo bandhigaan natiijada baaritaankaas, iyadoo inta uu baaritaanka socday ay jireen howl gallo dad badan lagu qab qabtay, kuwaasoo lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen weerarkaas.
Illaa todobo ruux oo afar ka tirsan ay ahaayeen shaqaalaha Ajnabiga ee UNICEF ayaa ku geeriyootay weerarkaas iyo saddex kale oo Soomaali ah, markii qof uu isku qarxiyay gaarigii ay la socdeen shaqaalaha.